Aatcc Crockmeter, Aatcc na-asacha agba agba, na -eche egwu na pill Tester - TST
Nnwale Ọsọ na agba
Usoro Ngwongwo Ihe Nkịtị
Ihe Ngbaputa Tensile
ọfịs na ebe a na-anwale ngwá ụlọ dị n’èzí
akụrụngwa nnwale ụfụfụ
nnwale ụlọ eji achọ mma
Ngwongwo osisi nke osisi
Nnwale akpụkpọ anụ
Mpempe akwụkwọ Carton na ngwugwu
Ule nchekwa ụmụaka
Ihe Nnyocha Flammability
Agba Matching usoro
Dkpụ Dkpụ .kpụkpọ ahụ
TST achịkọtara ihe eji eme sọftụwia, igwe, igwe, nrụgide mmanụ ala, nrụgide uzuoku, ngwa elektrik, moto, na nyocha na mmepe, mmesi obi ike, njikwa mmepụta, nnwale na ndị ọrụ ndị ọzọ iji nweta ozi oge. Ntinye aka nke TST Instruments (China) Co., Ltd guzobere na Maachị, 2006, nke bụ ọkachamara ụlọ ọrụ mba ụwa n'ichepụta igwe nnwale na akụrụngwa akpaaka.
Ntọala na 2006
Afọ iri na anọ
Ihe karịrị otu narị ngwaahịa
Dee azịza nke akụrụngwa nnwale nke ụlọ nyocha ma tinye mmepụta, imewe na nyocha na mmepe
Akpa na Suitcases Tester
Ngwa ngwa agba
Ngwá ụlọ ụlọ nyocha
Akpa na ikpe
Ihe mkpuchi ihe ...
Ojiji: PM filtration performance bench bench dị mma maka ịnwale arụmọrụ nke 45% -99.9% ọkwa ihe ndozi. A na-anwale ihe nzacha ahụ dịka ọkọlọtọ mba ụwa si dị. Ihe a haziri n’elu oche ule niile bụ kompeni na ọkụ, ma na usoro a na-agba ule ahụ, naanị ihe ọ ga-eweta bụ ịgbanye ike kwesịrị ekwesị na ikuku agbakọtara (enweghị mmiri, enweghị mmanụ), kwesịrị ekwesị maka iji ya rụọ ụlọ nyocha, ụlọ ọrụ na ihe ndị ọzọ. n'oge. Nyocha akwụkwọ nyocha ahụ, ndị…
Nguzogide Abrasion nke…
Ihe ngbata ndi mmadu ndi nnochi anya.
Nchedo glaze materia ...
Onye na-eme mkpọchi igbe ...
Akwụkwọ Ahụaja Washability ...
Nnukwu ihe eji emeghe Transpo ...
Nchịkwa Ejiri Mmetụta ...
Akwụkwọ ISO535 na ...
Nri Chemical Dryin ...
Akpụkpọ ụkwụ Akpụkpọ ụkwụ ...
Osisi ụlọ mecha ...
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ akụrụngwa ụlọ ọrụ China arụpụtarala nke ukwuu.
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ akụrụngwa ụlọ ọrụ China arụpụtarala nke ukwuu. Ọ bụ ezie na ngwa ngwa ngwa ngwa nke ụlọ ọfịs, ogo ngwaahịa bụkwa nsogbu a na-enweghị ike ileghara anya. Ya mere, ndị na-emepụta ngwá ụlọ na-ahọrọkarị ihe nwale a na-enyocha akụrụngwa dịka prod ...
Ongzọ Donghai CJ-23, Donghaibincheng, Park Industrial, Quanzhou, China
Ngwaahịa dị ọkụ - Sitemap